Tintin, dib ugu noqoshada carruurnimada - Geofumadas
Tintin, dib ugu noqoshada carruurnimada
Janaayo, 2012 Leisure / waxyi
Waxay ku fiicnayd in ay aragto filimka Tintin, Secret of Unicorn in ilaa todobaadkan ay ku soo bandhigeen habkan Central America.
Inkastoo ay tahay dabeecada mawqifka yurub, oo nuquladoodii koowaad ay soo baxeen sanadaha 30 Le Petit VingtièmeWaxaan xasuustaa markaan aqriyay markaan iskuulka kujiray, magaalo ay illowday ilbaxnimo oo maktabad macaan sameysay ayaa ka reebtay oo aan buugaagteena u qaadano xitaa fasaxa oo dhan. Wax fikrad ah kama haysto sida ay halkaas ku yimaadeen, laakiin waxaan xasuustaa akhrinta iyo dib u aqrinta iyaga iyo walaalahay ilaa aan ku dhowaa inaan iyaga ka ogaado qalbigayga, sheekooyinkaas xusuustayada ku sii jira oo maalin kasta ku soo noqda oo ruuxu doonayo inuu dareemo sidii ilmo oo kale ...
Ma jirin dhammaan dhacdooyinka marna dib uma arkin illaa iyo dhowr sano ka hor markii aan ku turunturooday dukaanka Amsterdam, suurtagal ma ahayn in la iska caabiyo jirrabaadda. Markii aan ku soo laabanaynay, waxaan la cunay iyaga iyo caruurtayda ilaa aan ka daalayno, markaa markay ku dhawaaqayeen filimka iyaga laftoodu waxay dhibsanayeen taariikhda waxayna ku calaacalayeen sababta hordhaca loogu wada noqon waayey wadamo oo dhan. Walaalkey wuxuu rabay inuu facebook iiga sheego markuu arkay xayeysiinta TV ga, laakin waxay usheegeen inuu xoogaa waqtigiisii ​​dhacay oo horey looga sii daayay wadamada kale.
Marka maanta, ka dib markii aan ku soo laabannay magaalada leh shineemo, oo Nachos ay ka buuxsan tahay jiis iyo salool, waxaan ku raaxeysanay galab weyn, maalintii iigu dambeysay ee fasaxa ee aan ka tagay. Markii aan u sheegay gabadhayda in arrinta ugu horreysay ay soo baxday 1930-kii, way qososhay, iyada oo qiraysa moodada geetooyinka iyo birta foojarka ee foodda saaran oo hadda moodada ah.
La qabsiga wuxuu sameeyay isbadalo badan, waxaan u maleynayaa inuu qoraalka ka dhigayo mid aad u ballaaran oo xiiso leh. Waxay ahayd markaa markaan ogahay inay wiilashaydu sheekada ku ogaayeen qalbiga ka dib markay kala dhexgalaan daqiiqad kasta:
Buugga Hernández iyo Fernández waxay gataan qasacado waxayna xadaan boorsooyinkooda ...
Walaalkood shimbiraha ma xusaan ...
Weligeed lama ogaan in iibsadaha kale ee markabkaasi uu ahaa baadha ...
Sidan maahan sida ay u qaadaan qaan-gooska ...
Sure, maahan sida majaajillada, laakiin dhagarta ayaa si fiican loo waafajiyay; maadaama aysan Tintin ku xirin guri laakiin markabka uu kula kulmayo Kabtan Haddock. Muuqaalka aad u wanaagsan ee Kabtanka oo raadinaya iskudhafyada gacanta oo sextant gacanta ku haya, maahan sida tan qosolka, laakiin iskuduwaha ayaa ah goobta markabku degaayo.
Xaqiiqdii, galab wacan.
Fasaxii wuu dhamaaday
Way fiican tahay inaad dib u noqotid.
Waxaan uga tagaa sawirada qaar ... maraqa hilibka badda, xeebta Amapala iyo Xarunta Taariikhda.
Post Previous" Hore Koorsooyinka GIS Online, oo Isbaanish ah, qaarna bilaash ah
Post Next Plex.Earth, tusaale wanaagsan oo ah dhexgalka suuqa HispanicNext »
3 jawaab wuxuu u bixiyaa "Tintin, ilaa caruurnimadii"
Sannad farxad leh
Carlos Guzman isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u maleynayaa inay fiican tahay, sababtoo ah waxay dib u soo celinaysaa xaalado dhowr ah oo ay ka mid yihiin Tin Tin, iyo asxaabtiisuba waxay maraan marxalado badan, ,,,,,
Waad salaaman tahay Don G! Farxad 03! Mar kasta oo aan arko maraq cuntada badda ka mid ah waxaan naftayda ku idhaahdaa: 'Waxaan u maleynayaa inaysan macquul ahayn in la wada dhammeeyo' 🙂